Maraykanka Oo ku dhawaaqay siyaasadiisa Cusub ee Afrika, iyo siday Somaliland iyo Somalia ula jaanqaadi doonaan. | Somaliland Mirror
Home WARARKA Maraykanka Oo ku dhawaaqay siyaasadiisa Cusub ee Afrika, iyo siday Somaliland iyo Somalia ula jaanqaadi doonaan.
Maraykanka Oo ku dhawaaqay siyaasadiisa Cusub ee Afrika, iyo siday Somaliland iyo Somalia ula jaanqaadi doonaan.
adminDec 17, 2018WARARKA0
Washington( somalilandmirror.com)-Dawlada Maraykanka ayaa khamiistii dhawayd ku dhawaaqday siyaasadeeda cusub ee ku wajahan Afrika.
Rukunada ugu waawayn ee siyaasada cusub ee Maraykanka ayaa ah kor u qaadida iyo horumarinta xidhiidhka ganacsi iyo maalgashi ee Maraykanka iyo Afrika.
Sanadkan sii dhamaanaya ee 2018 horaantiisii ayaa kongariska Maraykanku ansixiyay xeer lagu samaynayo ha’yad maalgashi oo lagu maalgalinayo waddanada dabada, taas oo loo sameeyay miisaaniyad gaadhaysa 60 billion oo doolarka Maraykanka.
Ha’yadaas ayaa loo arkay inay tahay mid laga horgaynayo lacagaha badan ee China ku maalgaliso qaarada Afrika.
Siyaasada cusub ee Maraykanka oo magaceedu yahay “ Prosper Afrika “ ayaa waxaa lagu dhiiri galinayaa madaxda Afrika inay waddanadooda u doortaan maalgashi daahfuran oo tayo wacan leh islamarkaana aanay ku hoos jirin wax madmadaw ah .
Siyaasadan cusub ee Maraykanka ee Afrika uu ula soojeestay ayaa Maraykanku wuxuu si cad uu ugula tartamayaa China iyo Ruushka, laakin Maraykanka ayaa dadka siyaasada falanqeeya u arkaan inuu habsan yahay,
waayo China in kabadan 10 sanadood waxa ay ahaayeen saaxiibka ugu wayn ee Afrika xagga ganacsiga iyo maalgashiga.
Waxa kale ay dadka siyaasada falanqeeya ku doodayaan in Maraykanku aanu maalgashi iyo ganacsi kaliya kaga hortagi karayn China, balse uu u baahanyahay inuu xidhiidho ku qotama saaxibtinimo siyaasadeed ka samaysto Afrika
Tartanka uu Maraykanku kula jiro China iyo Ruushka ee Afrika ayaa waxaa la socda in Maraykanku ciidamadiisii Afrika joogay yaraynayo, ciidamadaas oo uu u adeegsan jiray ladagaalanka argaxisasada.
Maraykanka ayaa ciidanka uu yaraynayo wuxuu damacsanyahay in hawshaa ciidankiisu qaban lahaa ay u qabtaan ciidama kale oo ka tirsan qaarada Afrika ama qayb kasta oo Afrika ka tirsan ay iskeed isugu tashato, halka uu isagu siyaasad qabaw la dhex gali doono Afrika.
Soomaaliya ayaa Maraykanku isagoo ka maqnaa wakhti aad u badan ayaa dawlada Maraykanka ee Madaxwayne Trump hogaaminayo waxa ay culays saartay xagga la dagaalanka argaxisasada.
Inkastoo dhawaan Maraykanku shaaciyay inuu safaaradiisii hore ee Somalia dib u furayo haddana kuma uu guulaysan sababo nabad galiyo darro awgood , oo wuxuu isku koobay shaqaale tira yar oo degan xaruunta madaarka ee aadka loo ilaaliyo.
Dawlada Somalia ayaa in kabadan 26 sanadood burburkii ka dib wali la daala dhacaysa maamul aan wada gaadhayn waddanka, musuq maasuq, weerarada ururka Al-shabab, iyo khilaaf kala dhaxeeya maamul gobaleedyada.
Halka Somaliland ay ka badbaaday carqaladahaas iyo dhibaatooyinkaas oo dhan , islamarkaana ku guulaystay inay qabato doorashoyinka hal cod iyo hal qof lagu kala baxo.
Siyaasada cusub ee Maraykanka ayaan wali la garanayn sida tooska ah ee ay u saamaynayso Somalia iyo Somaliland toona, laakin waxaa cad in dawlada Somalia ayna wakhtigan la jaanqaadi karayn siyaasada cusub ee Maraykanka ee ku salaysan maalgashi iyo ganacsi, maadaama ay nabad galiyo darro wayn ka jirto.
Somaliland ayaa markiiba soo dhawaysay siyaasada cusub ee Maraykanka oo uu Wasiirka arrimaha Dibada Somaliland Yaasin Xaji Maxamuud markiiba ka hadlay isagoo ku sugnaa xaruuntii lagaga dhawaaqay siyaasada cusub ee Maraykanka,
wuxuuna yidhi “Somaliland way soo dhawaynaysaa siyaasada cusub ee Maraykanka wayna la jaanqaadi doontaa, islamarkaana hore ayay uga sii shaqaysay inay isu diyaariso maalgashi dabadeed iyo ganacsi ay la yeelato cid kasta oo danaynaysa inay maalgashato”.
Wasiirka ayaa wuxuu intaa ku daray “in siyaasada cusub ee Maraykanku ay albaabada u furtay inuu bilaabmo xidhiidh diblumaasi oo saaxib timo leh oo labada dhinac wax badan ka faa’idi doonaan”.
Previous PostUS Airstrike In Somalia ‘Kills 62 Militants’ Next PostIsku aadka wareega labaad ee Champions League oo lagu dhawaaqay iyo kooxo waawayn oo isku beegmay